Madaxweyne Gaas oo caawa la hadlay shacabka Puntland kana hadlay duullaanka Somaliland (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo caawa la hadlay shacabka Puntland kana hadlay duullaanka Somaliland (dhegayso)
Janaayo 10, 2018 12:37 b 1
Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay duulaankii Tukaraq ay shalay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan Somaliland, ayna kula wareegeen.
Madaxwaynaha ayaa sheegay duulaankan inuu yahay mid lagu carqaladaynayo midnimada umadda Soomaaliyeed, xilli Puntland ay ku mashquulsanayd soodhoweyntaha Madaxweynaha Dowladda Feaderaalka ee Soomaaliya. Gaas waxa uu sheegay in Somaliland ay qaadi doonto masuuliyadda wixii ka dhasha weerarkii ay ku soo qaaday Tukaraq.
“Puntland waxa ay ku mashquulsantahay ladagaalanka argagaxisada caalamiga ah iyo dib-u-dhiska dalka,” ayuu yiri Gaas. Dhanka kale, Gaas ayaa shacabka ugu baaqay in ay u diyaargaroobaan difaaca Puntland, lana garabistaago ciidamada difaaca ee Puntland.
Hoos ka dhegayso lahadalkii Madaxweyne Gaas la hadlay dadka reer Puntland.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20369
Xubintii Ciyaaraha: Mar kale iyo Arsenal fkf Chelsea oo waa kee? (dhegayso)
Jaamac Qabqable 2 years ago
Boowe magaca iska sax waxaad meesha ku qortay madaxwaynaha dowlada federalka ah ee somaliland